Ahoana no anampian'i Flibanserin ny vehivavy toy ny hormonina firaisana
/Blog/Gallery/Ahoana no anampian'i Flibanserin ny vehivavy toy ny hormonina firaisana
Posted on 11 / 11 / 2019 by 阿斯劳 nanoratra tao Gallery.
Ny fanontaniana lehibe anefa dia izao; ahoana no fomba fiasa? Tsy mbola nisy ny fanadihadiana mazava momba ilay mekanika nampiasain'ity fanafody ity mba hahazoana vokatra. Na izany aza, ny mpikaroka dia nanisy teôlôjia, taorian'ny fanoloran-tena fa ny serotonin dia tompon'andraikitra amin'ny fanakanana ny firaisana ara-nofo ary hitan'izy ireo fa Flibanserin167933-07-5) mampihena ny fiasan'ny serotonine ao amin'ny ati-doha. Ho setrin'izany, mamerina ny faniriana hanao firaisana amin'ny vehivavy. Ary koa, ny fanafody dia misy fiantraikany tsy mivantana amin'ny norepinephrine sy dopamine, izay mifandray amin'ny faniriana hanao firaisana ara-nofo.
Raha diso ianao Flibanserin fatra mandritra ny fotoana fatoriana dia azo atao ny miandry anao mandra-pahatongan'ny fotoana fatoriana manaraka hitondrana ny fanafody.
Araka ny fanadihadiana maro sy ny fanadihadiana hoc hoc, vehivavy postmenopausal sy premenopausal izay nampiasa io fanafody io ho an'ny hypoactive firaisana ara-nofo ny fikorontanan-tsaina dia mety hihena. Andao hatrehana izany. Betsaka ny vehivavy no mahatsapa ny lanjany ary matahotra ny hampiasa zavatra mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny lanjan'izy ireo. Mahatsiaro ho maivamaivana toy izany ny mahafantatra fa ny fampiasana FLIBASERIN dia tsy misy fiatraikany lanja amin'ny olombelona, ​​fa manampy azy ireo handany lanjany lehibe izany. Raha niady tamin'ny olan'ny lanja ianao ary nitady fomba tsy nahomby tamin'ny famoahana azy, dia ampiana io fanafody io.
Amazon Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Boky torolàlana momba ny pilina fampiroboroboana vehivavy izay mampiroborobo ny firaisana ara-nofo ary manampy ny vehivavy hahatratra Orgasm marobe, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). "Pharmacology of flibanserin". CNS Review zava-mahadomelina. 8 (2): 117–42.
Ny zavatra rehetra momba ny Oxandrolone (Anavar), mila fantatrao Ahoana ny fiasan'ny Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ho an'ny mpamorona vatana